Sarimihetsika fandefasana hafanana H&H: Ovaina ny fomba fihaonana maraina
Ny orinasan-tserasera H&H adiresy mafana dia nanapa-kevitra ny hanova ny fomba fihaonan'ny maraina amin'ny alàlan'ny fifanakalozan-kevitra, satria ny fomba taloha mba hanomezana aingam-panahy ny hafanam-pon'ny tsirairay handray anjara amin'ny hoe ilay farany niditra ny efitrano fivoriana no tokony hampiantrano dia nametra ny lohahevitra sy ny ...
“Manome fahalalahana ahy ny fifehezan-tena” fihazakazahana ho an'ny amboara Hehe Cup 6KM voalohany!
Ny maraimben'ny faha 15 aprily dia nivory tao amin'ny ozinina Qidong ireo mpiadina an'i Hehe. Miaraka amin'ny teny filamatra "Ny fifehezan-tena dia manome fahalalahana ho ahy", nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fihazakazahana ny Health Cup Cup 6km voalohany. 6km fihazakazahana ara-pahasalamana, aseho amin'ny endrika ilay lalana: Hehe New Mater ...
Hehe ny fizarana dia manasa anao handray anjara amin'ny fampirantiana fitaovana kiraro Jinjiang!
piraofilin'ny orinasa Jiangsu Hehe New Material Co., Ltd., nipoitra tamin'ny 2004, dia orinasa vaovao natokana ho an'ny fikarohana, ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny fivarotana sary mihetsika mafana miempo mamelombelona sy tontolo iainana teknolojia avo lenta ao amin'ny faritany Jiangsu. 1. ISO9001 fitantanana kalitao syst ...
Sarimihetsika fametahana H&H Hotmelt: Hiditra amin'ny indostrian'ny kiraro iraisam-pirenena Shina (Jinjiang) faha-22 isika ary fampirantiana indostrian'ny fanatanjahantena iraisam-pirenena fahadimy
Hiditra amin'ny sehatry ny indostrian'ny kiraro iraisam-pirenena Shina (Jinjiang) faha-22 & Expo Indostrian'ny fanatanjahantena iraisam-pirenena fahadimy isika ao amin'ny tanànan'i Jinjiang, faritany Fujian manomboka amin'ny 19.04.2021-22.04.2021. Amin'izany fotoana izany dia hampiseho ny vokatra sarimihetsika adhesive mafana mihetsiketsika ampiasaina amin'ny sehatry ny kiraro fitaovana, ary hampiseho aminao ...
Horonantsary adhesive mafana mandoko H&H: manana fiofanana momba ny fomba fisainana
Ny herinandro lasa teo dia nandray anjara tamin'ny fiofanana nandritra ny telo andro ny mpiasanay momba ny fomba fisainana sy ny fomba fiasa. Amin'ity hetsika ity, ny tsirairay dia mahazo traikefa sy fahalalana amin'ny fiaraha-miasa, handresy ny zava-tsarotra ary hamita ny fiaraha-miasa. Ny mpampianatra dia hizara fahamarinana vitsivitsy ary hitandrina ...
Sarimihetsika fandefasana hafanana mafana H&H: mitazona ny vidim-piainana ny akora simika rehetra
Ry mpanjifa malala satria misy antony tsy azo vinavinaina, ny vidin'ny akora simika dia miakatra tato ho ato. Terena hanova ny vidiny izahay mandritra io oram-baratra io. Ny vokatra EVA, TPU, PES, PA, PO rehetra dia niova tamin'ny vidiny. Eto izahay dia manazava ny momba anao, manantena fa azonao ny ...
Sarimihetsika fametahana hafanana H&H: fivoriana hizarana ny fahatsapana momba ilay hetsika tamin'ny alahady lasa teo
Sarimihetsika fametahana hafanana H&H: fivoriana iray hizarana ny fahatsapana momba ilay hetsika tamin'ny alahady lasa teo. Ny ivon-toerana fivarotana H&H dia nanomana fivoriana hizarana ny fahatsapana sy ny eritreritra momba ilay hetsika tamin'ny alahady lasa teo. Nandritra ny fihaonana dia samy nizara eritreritra sy fahatsapana be dia be ny tsirairay hatramin'ny ...
Sarimihetsika fandefasana hafanana mafana H&H: hanatsarana ny kalitaon'ny fivorian'ny departemanta
Nanatsoaka hevitra izahay fa ny fivorian'ny departemanta dia tokony hatao amin'ny fomba mahomby. Ny mpampiantrano dia nanolotra lohahevitra momba izany ary namela mpitantana sy mpiasa maromaro hilaza ny heviny sy ny torohevitr'izy ireo. Raha ny hevitry ny mpitantana HR dia ilaina ny mifehy ny faharetan'ny ...
Sarimihetsika fametahana hafanana H&H: tonga nijery ny famokarana ny iray amin'ireo mpanjifanay
Omaly ny iray amin'ireo mpanjifanay avy any Amerika dia tonga nijery ny famokarana. Tena mahalala fomba sy tsara fanahy izy roa vavy. Naharitra 2.5 ora ny fiara raha avy tany amin'ny seranam-piaramanidina Hongqiao nankany amin'ny ozinina. Vantany vao tonga tany amin'ny orinasa tany Qidong, Nantong izahay, dia vitantsika faingana ny sakafo atoandro ary mifantoka amin'ny inspecti ...
Endri-tsarimihetsika sarimihetsika mafana mametaka pes
avy amin'ny admin tamin'ny 20-11-09
Ny horonantsary adhesive mafana-melt dia karazan-materialy azo fehezina mafana-mafana mba hanaovana sarimihetsika misy hateviny, ary ny fifamatorana adhesive mafana dia ampiharina eo anelanelan'ny fitaovana. Ny sarimihetsika dity miempo mafana dia tsy fametahana tokana, fa karazana lakaoly. Toy ny PE, EVA, PA, PU, ​​PES, polye novaina ...
Ny fampiasana Hehe adhesive mafana miempo amin'ny fonon-rindrina tsy misy tohika
Miaraka amin'ny fivelarana mitohy eo amin'ny indostrialy mirakotra rindrina mirindra, toy ny iray amin'ireo fitaovana ilaina amin'ny haingon-trano, ny fanakonana ny rindrina dia tsy mila atao tsara tarehy fotsiny, fa mila manana tontolo iainana koa. Ny lakaoly mahazatra na ny lakaoly lava dia miraikitra amin'ny rindrina, amin'ny ...
Milina mametaka sarimihetsika mihetsiketsika mihetsika
Fitaovana fanosotra horonantsary mihetsiketsika mafana nozaraina roa karazana amin'ny fomba fiasa, karazana fanindriana ary karazana fitambarana. 1. Fitaovana fanerena Sakany fampiharana, mety amin'ny akora vita amin'ny ravina fotsiny, fa tsy amin'ny laminasy mihodina, toy ny marika famantarana ny akanjo, fitaovana kiraro sns ... Fanindriana ...